२६ दिनमा १२ प्रतिशत कमाए नेपाल इन्स्योरेन्सका शेयरधनीले – Insurance Khabar
२६ दिनमा १२ प्रतिशत कमाए नेपाल इन्स्योरेन्सका शेयरधनीले
प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७५, बुधबार ०६:४४
बीमा कम्पनीका सेयर पनि बढ्न थाले
२६ दिनको अवधिमा ११ वटा बीमा कम्पनीको सेयरमूल्य धेरैले बढेको छ । जसमध्ये प्रिमियर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा धेरैले बढेको छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमूल्य ११८ ले बढेको छ । उक्त अवधिमा कम्पनीको अधिकत्तम सेयरमूल्य १ हजार १९५ रुपैयाँ पुगेको थियो भने न्यूनत्तम १ हजार २१ रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, कम्पनीको अन्तिम सेयरमूल्य १ हजार १४४ रुपैयाँ कायम भएको छ । सो अवधिमा कम्पनीको ७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको ६६ हजार ८४५ कित्ता सेयर कारोबार भएको छ ।
त्यस्तै, सगथरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमूल्य भने १०४ रुपैयाँले बढेको छ । उक्त अवधिमा कम्पनीको अधिकत्तम सेयरमूल्य १ हजार ४८० पुगेको थियो भने न्यूनत्तम १ हजार ३४२ रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, कम्पनीको सेयरमूल्य १ हजार ४४९ रुपैयाँ कायम भएको छ । सो अवधिमा कम्पनीको १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ४२० कित्ता सेयर खरिद विक्री भएको छ ।
नेप्सेमा सूचीकृत जीवन बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक सूचकको अवस्था कस्तो ?
स्वरोजगार लघुवित्तको शेयर मूल्य समायोजन
नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चरको कारोबार सुरु भए सँगै नेप्सेले थप्यो नयाँ इन्डेक्स
यो साता नेप्सेमा १५ कम्पनीको शेयर सूचीकृत, कसको कति ?
अलविदा नेपाली बीमा जगतका संस्थापक कुवेर प्रसाद शर्मा
युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोपावरको यस्तो देखियो दोस्रो त्रैमास
महिला लघुवित्तको शेयर रजिष्ट्रारमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ नियुक्त